[06 / 10 / 2019] Metrobus Metrobus Halıcıoğluများပြား,3ဒဏ်ရာရခဲ့	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[06 / 10 / 2019] တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးအင်ဂျင်စက်ရုံ: 'ငွေအင်ဂျင်' '	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[06 / 10 / 2019] အမျိုးသားထုတ်လုပ်မှုကိုဘယ်လို Blocked	38 Kayseri
[06 / 10 / 2019] ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးဒီဇယ်အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကျော်၏TÜMOSANစီးရီး	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[06 / 10 / 2019] ခါးပတ်လမ်းစီမံကိန်းဆင်းရဲမွဲတေမှုကနေ 40 လူဦးရေသန်းထမြောက်မည်	86 တရုတ်
[05 / 10 / 2019] TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုကနေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen အထွေထွေမန်နေဂျာ Views စာမှဂုဏ်ယူပါတယ်	06 တူရကီ
[05 / 10 / 2019] အမေရိကန် Triple လေယာဉ်ပြေးလမ်း၏အပြင်ဘက်တွင်စစ်ဆင်ရေးပထမဦးစွာအချိန်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပျက်သွား! "	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[05 / 10 / 2019] တူရကီကျူးကျော်နေထိုင်သူအတွက်ကျောင်းသားများပံ့ပိုးဖို့အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး	06 တူရကီ
[05 / 10 / 2019]7။ ဒါဟာ Konya သိပ္ပံပွဲတော်မှာသိပ္ပံစိတ်အားထက်သန်မှ၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်	42 Konya
[05 / 10 / 2019] Thrace အတွက်ကျင်းပ '' စက်ခေါင်းနှင့် Wagon စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များစီးပွားရေးဖိုရမ် "	59 Tekirdag
နေ့: စက်တင်ဘာလ 23 2019
Eskişehirကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုအခြားမြို့များမှဥပမာတစ်ခုဖြစ်ဆက်လက်မြူနီစီပယ်ကွန်ကရစ်လမ်း applications များအတိတ်နှစ်တွင်စတင်ခဲ့တယ်။ အထူးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိတွေပြီးနောက် Aydin Didim မြူနီစီပယ်ရာအရပျကွန်ကရစ်လမ်းပလီကေးရှင်းယခု Karaman နှင့် Ermenek စည်ပင်သာယာအရာရှိများက [ပို ... ]
တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor အနှေး, သူတို့ကမြို့တော်အတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ စက်ဘီးအငှားဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားအနှေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ထိုမက်ထရိုဘူတာများတွင်အခမဲ့ယာဉ်ရပ်နား၏လျှောက်လွှာကနေစက်ဘီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, လျှပ်စစ်စက်ဘီးကိုရှင်းပြဥရောပ Mobility ကိုအပတ်သမ္မတ, [ပို ... ]
နိုင်ငံသားများ၏ Sapanca Ropeway Project မှပုန်ကန်
Ropeway Project မှနိုင်ငံသားများ၏တုံ့ပြန်မှုစေခဲ့ပါတယ်အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်း၏ထူးခြားသောအလှအပနှင့်အတူခရီးသွားဧည့်များအတွက်အများဆုံးနှစ်သက်နေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်သည့်သဘာဝနှင့် Sapanca ၌တည်၏။3သစ်ပင်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏များ၏ဆုံးရှုံးမှုပန်းခြံစီမံကိန်းနှင့်စုဝေးဧရိယာမြေငလျင်စေခံရစေမည် Sözcüအစ္စမေးလ်ကနေ [ပို ... ]
အဆိုပါကောင်းကင်အတွက်ပြင်သစ်၏ Eskisehir လေကြောင်းဆိုင်ရာ
စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များEskişehirကုန်သည်ကြီးများအသင်း (ESO), စီမံကိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Eskisehir လေကြောင်းကုမ္ပဏီများအရှိ "အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများနိုင်ငံတကာ Isageum နှင့်စပျစ်သီးပြွတ်" ကငွေကြေးထောက်ပံ့ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) ပြင်သစ်တွင်အစည်းအဝေးများတစ်စီးရီးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြင်သစ်ရဲ့လိုင်ယွန်မြို့အကြား 17-20 စက်တင်ဘာလ 2019 [ပို ... ]
TCDD 163 ။ နှစ်ပတ်လည်ပွဲ
TCDD 163 ။ နှစ်ပတ်လည်ပွဲ။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထားနှင့်İzmirပြည်နယ်ဆငျဖိုနီသံစုံတီးဝိုင်းအဆိုပါခရီးသွား Orient Express ကိုလှည့်လည်နဲ့ပူးပေါင်းပြီး! TCDD 163 ။ 23-29 စက်တင်ဘာလနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. TCDD İzmirပြည်နယ်ဆငျဖိုနီသံစုံတီးဝိုင်းဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနှစ်မြောက်ဖြစ်ရပ်များ [ပို ... ]
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် affiliates, Inc ulaşımpark Kocaelispor ရဲ့ပွဲစဉ်မှအပိုဆောင်းဘတ်စ်ကားလိုင်းချပြီး Sivas Belediyespor နိုင်ငံသားများ၏ Ziraat တူရကီဖလားxnumx'üncခြေစစ်ပွဲပတ်ပတ်လည်ကိုတိုက်ရိုက်အဖြစ် Kocaeli အားကစားကွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဤအခြေအနေတွင်ယင်းမြို့တော်မြူနီစီပယ်,3အတွက် [ပို ... ]
ကို 'ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု' 'ခေါ်ဆိုမှုအတွက်ရထားသီချင်းများထဲကနေsamulaş
ဘီးစီမံကိန်း Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆောက်လုပ်ရေးရွက်လှေ၌ကြီးသောအတိုးဆွဲဆောင်သည့်ပတ်တီးတာကိုအခါနယူးမျိုးဆက်မှာအစ္စတန်ဘူလ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားနည်းပညာညီလာခံအတွင်းကျင်းပခဲ့သည့် '' Localization '' တင်ဆက်မှုအာရုံကိုsamulaş။ စန်း။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်နယူးတှငျကငျြးပခဲ့ Inc ကို (SAMULAŞ), [ပို ... ]
ဝန်ကြီး Turhan, 'ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အမျိုးသားအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားသတ်မှတ်မည်များ၏ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်' '
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦန်ကြီးအမ် Cahit Turhan, စက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Mustafa Varank တူရကီရဲ့သိပ္ပံနှင့်တူရကီ၏နည်းပညာတက္ကသိုလ်သုတေသနကောင်စီ (TUBITAK) နှင့် "ပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာ၏မီးရထားဌာန Institute" တွင်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) ၏သမ္မတနိုင်ငံ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူထွက်ယူသွားတတ်၏ [ပို ... ]
တာရှုမွို့,4ဒဏ်ရာရသူ၌ငါ၏တန်း၏ Gateway မှာတစျခုနှင့်အတူရထားကား Collider
မတော်တဆမှုအတွက် Mersin ၏တာရှုမွို့ခရိုင်၏ညဉ့်နေစဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောရထားခုနှစ်, ကုန်တင်ရထားငါ၏တန်း4ကျမ်းပိုဒ်များတွင် hit သောကားကိုဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ အစီရင်ခံစာများအရ, မတော်တဆထိခိုက်မှု sequence ကို 22.15 ၏ညဉ့်, Yenice ခရိုင်Yunacıkလမ်းလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်တန်းဖြတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Adana Nigde [ပို ... ]
Akçaray, Record ကို 50 436 အားဖြင့်တစ်ခုမှာနေ့အတွက်တထောင်ခရီးသည်ရွှေ့ထပ်လောင်းအတည်ပြု
affiliates ထံမှ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Inc ကိုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းulaşımpark, Akçarayလမ်းရထားကောက်ယူ 50 436 တထောင်ခရီးသည်ရွေ့လျားစံချိန်နေ့ကထပ်မံအတည်ပြုပြောကြားသည်။ နိုင်ငံသားများကကမ်းလှမ်းသြဂုတ်လ 1 2017 Akçarayလမ်းရထားန်ဆောင်မှုများကတည်းကမြူနီစီပယ် Kocaelili, အ All-အချိန်စံချိန် [ပို ... ]
İmamoğlu, 'အတူတူလမ်းလျှောက်ဖို့ carfree မြို့ကြီးများနေ့' 'ပွဲပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, 'ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်' 'စနစ်တကျလုပ်ဆောင်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်,' အတူတကွကျနော်တို့နေ့ carfree မြို့ကြီးများလမ်းလျှောက် '' အဖြစ်အပျက်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Mateja Zakonjsek နေဖြင့်ဘဂ္ဂဒက်လမ်း, တူရကီခရစ်ယာန် Berger မှအီးယူကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အကြီးအကဲ, အီးယူထောင်ပေါင်းများစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးအဖွဲ့အတွင်းဆန္ဒပြ [ပို ... ]
Carfree မြို့လမ်းများနှင့်ပွင့်လင်းနေ့ Izmir ကျင်းပခဲ့သည်
Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့ Mobility ကိုအပတ်များ၏နယ်ပယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့သောဖြစ်ရပ်များကိုယနေ့ဆက်လက်ခံခဲ့ရသည်။ Izmir အတွက်ယခုနှစ်တွင်ထိုနေ့ရက်တွင်ဥရောပတိုက်တွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်စက်တင်ဘာလ 22 အပေါ်ဂုဏ်ပြုသည် "carfree မြို့ကြီးများနေ့" နှင့် "တပ်ဦး Street, နေ့" (ပွင့်လင်းလမ်းများကိုနေ့) ဖြစ်ရပ်များ [ပို ... ]
ဂရိတ်အတိုးနှုန်း၏ Kayseri စက်ဘီးခရီးစဉ်အတွက်စီစဉ်ပေး
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်အပေါ်အသစ်တစ်ခုအဖြစ်အပျက်ကဆက်ပြောသည်သိရသည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအားကစား In-အိမ်သူအိမ်သား Inc က ထိုအခါစက်ဘီးခရီးစဉ်ကစီစဉ်အကြောင်းကို2တထောင်ကလူမြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာများ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူကျင်းပ Mamdouh Büyükkılıç'ınလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက် [ပို ... ]
Samsun Ladik Akdag နှင်းလျှောစီး Center ကမှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးဖြစ်နိုင်ဘူး
Samsun ၏ပင်လယ်နက်၏အကြီးဆုံးမြို့ပြမြို့မြို့တော်မြူနီစီပယ်, ခရီးသွားလုပ်ငန်းအလားအလာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် Ladik ခရိုင်တိုးတက်စေရန်အလို့ငှာ Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏ခရီးသွားဧရိယာထဲမှာကဏ္ဍသိသိသာသာအလားအလာကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် Ladik ခရိုင်အတွင်းရှိနောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် [ပို ... ]
'' အဲဒီမှာက Metro အားကစား '' ပွဲကနေ IMM
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, ဥရောပအားကစားအပတ် 23-30 စက်တင်ဘာလ၏အခြေအနေတွင်အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများစည်းရုံးလိမ့်မယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်ဟာသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝလှုပ်ရှားမှုများ၏ရွေ့လျားတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ အားလုံးအစ္စတန်ဘူလ်မှမောင်းနှင်ခြင်းဖြင့်သူတို့ရဲ့ဘဝအရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်ဖို့တစ်ကျန်းမာတက်ကြွအသက်အဘို့အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, [ပို ... ]
ကြီးမြတ်တဲ့ပါဝါဖန်တီး TUBITAK နှင့် TCDD ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး
အဆိုပါသိပ္ပံနှင့် "ရထားပို့ဆောင်ရေး Technologies က၏ Institute က" အကြားနည်းပညာသုတေသနတူရကီ၏ကောင်စီ (TUBITAK) နှင့်တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD), ထူထောင်မှုအပေါ်တစ်ဦးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု protocol ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ စက်မှုနဲ့ကျင်းပခဲ့သောလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားတွင်ဖန်ဆင်းနည်းပညာဝန်ကြီး Mustafa Varank, [ပို ... ]
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: စက်တင်ဘာလ 23 1856 တူရကီမီးရထား
ယနေ့တွင်သမိုင်းစက်တင်ဘာလအတွင်း 23 1856 1856 တူရကီရထားလမ်းသမိုင်းအတွက်စတင်သည်။ Izmir ၏ထားတဲ့ 130 ကီလိုမီတာပထမဦးဆုံးမီးရထားလမ်း - ဗြိတိသျှကုမ္ပဏီမှAydınလိုင်းဒီနှစ် vuruldu.imtiyaz တစ်ဦးအခွင့်ထူးတူးပထမဦးဆုံးထောက်ပံ့; ယောသပ်သည် Paxton, ဂျော့ခ်ျ Whytes, [ပို ... ]
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုကနေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen အထွေထွေမန်နေဂျာ Views စာမှဂုဏ်ယူပါတယ်
Bursa ယာဉ်အသွားအလာ "6 ။ နောက်ဆက်တွဲ II ကို Run ကို Run ကို "ပြင်ဆင်မှုအား! .. တချို့ကလမ်းများပိတ်ထားပါလိမ့်မည်
Bismil ထဲမှာအခမဲ့ဆေးရုံန်ဆောင်မှုများန်ဆောင်မှုများ Continues
လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိ Tasucu ၏ဆိပ်ကမ်းသမ္မတရဲ့ရွေးချယ်မှု,
Thrace အတွက်ကျင်းပ '' စက်ခေါင်းနှင့် Wagon စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များစီးပွားရေးဖိုရမ် "
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်İmamoğlu: 'အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ရထားဘူတာပြည်သူ့ပိုင်' '
တူရကီ Giants Thrace အတွက်မီးရထားကဏ္ဍများ၏တီထွင်မှုခဲ့သည်
Project မှဘဝကလွန် Kayseri '၌ရပ်တန့်သင်္ချာ' '
နှစ်ဦးစလုံးတိုးချဲ့နှင့် Atabay ကူးတို့လမ်းမခင်းခဲ့
ကြည်းတပ်အတွက်ကြိတ်စက် Compact ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးအလေ့အကျင့်စတင်
Antalya မြန်နှုန်းကန့်သတ် Changed
Bodrum ဘတ်စ်ကားဘူတာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင် Continues
Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ရထားဘူတာလေလံ Done! .. သူကားအဘယ်သူ Verdi တင်ဒါကမ်းလှမ်းချက်ကြည့်ပါ ..
Konya, တူရကီစက်ဘီး Path ကို၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်
Kurbağalıdereတိုးတက်မှုစီမံကိန်း Scope က e-xnumx't လေ့လာမှုဆွဲဆောင်မှုများ
ဝန်ကြီးဌာန, အစ္စတန်ဘူလ် Channel ကိုအချက်ပေးထံမှ
အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုပြန် Sapanca နူးညံ့ MI လာဘ်ပေးလာဘ်ယူအတွက်ခဲ့သလဲ
8: အောက်တိုဘာလ 10 00 @ - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Artova, Bekdig ရဲ့, Suluova, လုပ်ငန်းခွင်ပြုလုပ်ခြင်း Turhal Yesilyurt ဘူတာနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်က Wall မှအမျိုးအစား Panel ကို
8: အောက်တိုဘာလ 14 00 @ - 15: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့် Crossing အတွက်ရော်ဘာ Coating
9: အောက်တိုဘာလ 10 00 @ - 11: 00
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ31932 Izmir ဆိပ်ခံတံတားကုမ္ပဏီ
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ21890 ဒေါက်တာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Shakir အရာရှိများ ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ 1 1937 Catalagzi-line ကို Zonguldak
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (100) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro ဒီရက်သတ္တပတ်ကြံ့ခိုင်ရေးဖြည့်
ကိယက်ဗ် Podol ခရိုင်ရှိမက်ထရိုဘော်ဒါဆောင်ကတည်းကထုတ်ဖော်ပြသ
samulaş '' ဘောလုံး '' ပွဲများတွင်!
IETT ITU ရဲ့မောင်းသူမဲ့ယာဉ်စီမံကိန်းမှပံ့ပိုး Give မှ
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Bosphorus တံတားများတွင်ငလျင်ပျက်စီးမှုတောင်းဆိုချက်များ
1915 Canakkale တံတား Foot မြှင့်တင်ရေး Continues
Bursa တဲ့ Metropolitan ၏စပ်စုသိပ္ပံအတူတကွယူဆောင်မှ teknofest'l
ဖြိုဖျက် Ataturk လေဆိပ်များအတွက်တင်ဒါ